UYotham: Wahlala Ethembekile Phantsi Kwazo Nje Iingxaki Zakowabo | Fundisa Abantwana Bakho
XA UMZALI eyeka ukukhonza uThixo oyinyaniso, uYehova, oko kunokwenza izinto zingahambi kakuhle kubomi bomntwana. Makhe sithethe ngoYotham. Siza kufunda ngeengxaki awajamelana ekukhuleni kwakhe.
Uyise kaYotham yayingu-Uziya, ukumkani wakwaYuda. Wayeyeyona ndoda inamandla kwelo. U-Uziya wayengukumkani olungileyo kangangeminyaka, kwanangaphambi kokuzalwa kukaYotham. Kodwa kamva, ngoxa uYotham wayeselula, u-Uziya wakhukhumala likratshi waza wophula umthetho kaThixo. Ngenxa yoko, uThixo wambetha ngesifo esibi, iqhenqa. Ngaba uyazi ukuba wenza ntoni uYotham?— *
UYotham waqhubeka ekhonza uYehova, mhlawumbi encedwa ngumama wakhe uYerusha. Sekunjalo, kusenokwenzeka ukuba kwakunzima ngoYotham ukuhlala ethembekile kuYehova emva kokuba uyise, u-Uziya wayeka ukuya endlini kaYehova.
Kuthekani ukuba utata okanye umama wakho uyekile ukukhonza uYehova? Izinto zingakuhambela nzima ebomini, akunjalo?— Kodwa akuphosakalanga ukucinga ngaloo ndlela ukuba umzali wakho uyayeka ukukhonza uYehova. Xa sifunda oko uDavide wakubhalayo eBhayibhileni sifunda okuthile.
UYese, uyise kaDavide wayeyindoda elungileyo. Wakhonza uYehova, yaye sinokuqiniseka ukuba uDavide wayemthanda utata wakhe. Kodwa uDavide wafunda ukuthanda uYehova ngaphezu koyise uYese. Makhe sibone ukuba kutheni sisitsho.
Nceda utyhile eBhayibhileni kwiNdumiso 27:10. UDavide wabhala wathi: “Nokuba ubawo noma bangandishiya, ke yena uYehova uya kundithabatha.” Khawucinge ngoku: Apha iBhayibhile ibonisa ukuba nokuba uyise kaDavide uYese, okanye unina babenokuyeka ukukhonza uYehova, yena wayeza kuqhubeka emkhonza.
Kuthekani ngawe? Ngaba ubunokuqhubeka ukhonza uYehova enoba umzali wakho uyayeka ukumkhonza?— Kuhle ukuzibuza lo mbuzo. Isizathu sinento yokwenza nowona myalelo ubalulekileyo eBhayibhileni. Uthi: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke nangengqondo yakho yonke.”
Lo myalelo uthetha ukuba simele sinyaniseke kuYehova nokuba sekumnyam’ entla. Ucinga ukuba ngubani ofuna siyeke ukukhonza uYehova?— Lutshaba lukaThixo uSathana uMtyholi. UYesu wambiza ngokuba “ngumlawuli weli hlabathi.” IBhayibhile ikwambiza ngokuba “nguthixo wale nkqubo yezinto”. Ngaba simele simoyike uSathana?—
Asimele simoyike. Kunoko sifanele sikhumbule ukuba uYehova unamandla angaphezulu kunakaSathana. UYehova uya kusikhusela ukuba sithembela ngaye. Funda eBhayibhileni yakho ngendlela uYehova awamkhusela ngayo uDavide kwingxilimbela eyayisoyikeka uGoliyati. UYehova angakukhusela nawe ukuba uqhubeka uthembekile kuye.
2 Kronike 26:16-21; 27:1, 2
Yohane 12:31; 2 Korinte 4:4
Hebhere 13:5, 6
^ isiqe. 4 Ukuba ufunda nomntwana, isikhewu senzelwe ukuba umvumele aphendule.